Darpan Nepal – यी ४ राशि भएका मानीसहरुले कहिले पनि अरुलाई धोका दिँदैन्न थाहा पाईराखौं, जानीराखौं!!
यी ४ राशि भएका मानीसहरुले कहिले पनि अरुलाई धोका दिँदैन्न थाहा पाईराखौं, जानीराखौं!!
यस दुनियामा हरेक व्यक्तिलाई धनी बन्ने चाहना हुन्छ । हरेक व्यक्ति बढी भन्दा बढी पैसा कमाउन चाहन्छ, जसको लागि उसले अधिक मेहेनत पनि गर्छ तरपनि कुनै न कुनै कारणले पैसा कमाउन सक्दैन ।
केही मानिस निकै मेहेनत गरेर पैसा कमाउँछन् तरपनि उनीहरूसँग पैसा टिक्दैन । आज हामी केही यस्ता मानिसको बारेमा चर्चा गर्दैछौँ, जुन मानिसहरूलाई सधैँ पैसाको कमी रहन्छ । यी ति मानिस हुन्, जो कहिलै धनी बन्न सक्दैनन् ।
यस्ता ४ व्यक्तिसँग कहिलै धन टिक्दैन:
गलत जीवनसाथी- यदि जीवनमा कोही गलत मानिसको प्रवेश भएमा तपाईको जीवन अवश्य खराब हुन्छ । तपाईको जीवन बर्बाद हुने निश्चित हुन् ।ग़लत जीवनसाथी रोज़े जीवनमा दु:ख प्राप्त हुन्छ।
रामचरितमानसको अनुसार जसले आफ्नो साथीलाई धोका दिन्छ, ति मानिसहरूलाई जीवनभरि पैसाको कमी रहन्छ ।लालची गर्नु- जो व्यक्ति सधैँ धनको लोभ गर्छ, उसलाई सधैँ पैसाको कमी रहन्छ । रामचरितमानस मा भनिएको छ कि जो मनिस धनको पछाडी भाग्छ, उनीहरू कहिलै धनी हुन सक्दैनन् ।
बढी घमण्ड गर्नु- हामीले कहिलै कुनै पनि चीजको घमण्ड गर्नु हुँदैन । सधैँ दोस्रो व्यक्तिलाई सम्मान गर्नुपर्दछ । रामचरितमानसको अनुसार जो व्यक्ति आफूलाई सधैँ अरू भन्दा बढी समझदार ठान्दछ, उसलाई सधैँ पैसाको कमी रहन्छ र यस्ता मानिस कहिलै धनी हुन सक्दैनन् ।
नशायुक्त पदार्थको सेवन- यो सबैलाई जानकारी भएकै कुरा होकी जुन मानिसलाई नशायुक्त पदार्थको लत लागेको हुन्छ, उनीहरूको जीवन नष्ट हुन्छ । यस्ता व्यक्ति प्रति कहिलै लक्ष्मीको कृपा रहँदैन ।
Previous Postके तपाईको दाँत पहेलो छ यसरी बनाउनुस्, दुई मिनेटमै पहेँलो दाँतलाई सेतो र चम्किलो ! (भिडियो सहित) Next Postयी सपनाहरु झुक्किएर पनि कसैलाई नसुनाऊनुस् ! कसैलाई सुनाउनै नहुने यी ५ सपनाहरु तल पढ्न्नुहोला !